Cirro oo Khudbad dhinacyo badan ka jeediyey Shirweynaha Dhalinyarada heer Qaran ee X/ WADDANI | Saxil News Network
Cirro oo Khudbad dhinacyo badan ka jeediyey Shirweynaha Dhalinyarada heer Qaran ee X/ WADDANI
Shirweynihii koowaad ee dhalinyarada heer Qaran ee Xisbiga Mucaaradka ah ee WADDANI, ayaa maanta si rasmi ah uga furmay Huteel Maansoor ee magaalada Hargeysa, kasoo ay ka soo qaybgaleen Ergooyin ka kala socday gobollada iyo degmooyinka guud ahaan Somaliland, waxaana furitaankii shirkaas khudbad dhinacyo kala duwan taabanaysa ka jeediyey Guddoomiyaha WADDANI Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cabdiraxmaan-Cirro).
Guddoomiyaha Xisbiga WADDANI ahna Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Somaliland, khudbadda uu ka jeediyey furitaankii Shirweynaha dhalinyarada heer Qaran ee WADDANI, waxa uu kaga hadlay arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin dhibaatooyinka dhalinyaradu la kulmaan sida Shaqo la’aanta, Shaqo-yaraanta, Tahriibka, Aqoonta, Qaraabo-kiilka, Qabiilaysiga, mawqifkooda arrimaha doorashooyinka, dib-u-dhaca wakhtiga doorashooyinka, diiwaangelinta, wadahadallada Somaliland kula jirto Soomaaliya, qodobbo kale iyo guud ahaanba mawqfika iyo ajandaha uga meel-yaal wax ka qabashada arrimahaas Xisbiga Mucaaradka ah ee WADDANI.
Khudbaddaa uu Guddoomiye Cabdiraxmaan-Cirro ka jeediyey Shirweynaha Dhalinyarada Xisbiga WADDANI ee maanta ka furmay Hargeysa oo Nuqul ka mid ah uu helay Aftahannews waxa uu qoraalkeedu u dhignaa sidatan:-
“1. Furitaanka: Soo dhoweyn iyo furitaanka munaasibadda Shirweynaha Dhalinyarada Heer Qaran ee Xisbiga WADDANI:
Waa Shireynihii 1aad ee Garabka Dhallinyarada ee Xisbiga WADDANI. Waa kii noociisa ah ee Xisbiyada Somaliland u qabteen dhalinyaro. Waa astaan in Xisbiga Waddani ay Dhalinyaradu u lafdhabar u tahay. Waa midaynta dhalinyaradda Somaliland ee ka kala yimi min Dhahar illaa Saylac, min Boorama illaa Badhan, min Laascaanood illaa Laas-Geel.
Waa bilowgi suggidda caddaladda doorka Hablaha oo 30% Ergooyinka laga codsaday inay Hablo ka soo dhigaan. Waxaan Shirkan idiinku qabannay inaad qabyaaladda kaga baxdaan oo noqotaan hal qabiil keliya oo magaciisa la yidhaa WADDANI kuna abtirsataan. Haddii la idink weydiiyo jilibka ama ardaaga aad ka tihiin jawaabtu WAA GARABKA DHALLINYARADA!.
Waa mustaqbalka Somaliland: waa maskaxda, muruqqa, maalka iyo kaydka Qaran oo kobcin iyo korin inooga baahan, waa khayraadka ugu muhiimsan ee Qaranka maanta haddii loo abuuro fursado la maali karo xoggooda iyo maskaxdooba. Isagoo ka duulaya arrimaha kore, Xisbiga WADDANI waxa mabda’ asaasi u ah in uu hooy u noqdo dhalinyaradu kaas oo ay ku koraan, ku hawlgalaan, kuna dhistaan hiigsi barwaaqo.
Caqbadaha Hortaagan Dhalinyarada
Xagga Sharciga iyo da’da: Waxa Xisbiga WADDANI siyaasaddiisu u adeegaysaa in dhaliyarada Somaliland laga horqaado caqabado sharci ee ka hortaaggan in ay hoggaamainta dalka ka qaybgalaan.
In dabarka laga furo sidii ay si buuxda looga fa’iidaysan lahaa xooggooda iyo maskaxdooda oo ay kaalin mug lehna uga qaataan horumraka dalka iyo bulshadaba. Waxaa Xisbiga WADDANI ugu yaraan 30% siinayaa hablaha fursadaha shaqo iyo hoggamintaba.
Xisbiga WADDANI wuxuu la dagaalamayaa caqabadaha xagga shaqada kaga yimaadda dhallinyarada ee da’da lagu riixo; Qaraabo kiiliyo Gobolaysi: Xisbiga WADDANI wuxuu sugayaa caddaaladda u tartanka fursadaha shaqo, waxabarasho, iyo maalgashi.
4.Mudnaanta Waxbarashada iyo Isbootiga:
Siyaasadda Xisbiga WADDANI ee horumarka Somaliland waxaa mudnaanta kobaad leh in la dhiso khayraadka dadka (Hunan Resource) ee dalka. Waxa lagu dhisayaa waa waxbarasho tayo iyo baaxadba leh. Waxa kow mudnaanta leh oo ay u adeegaysaa siyaasadduna daryeelka dhaliyarada.
Waxana Iyana uu Xisbga WADDANI mudnaan gaar ah siinayaa baahinta iyo kor u qaadidda awoodda isboorti ee Somaliland oo halbowle u ah barbaarinta dhalinyarada: waa koriinka garaadka, jidhka iyo wada- noolaashaha bulshada (social). Si taas loo helo, waa in goob kasta oo wax barasho ama deegaan loo qorsheeyo xarunta ciyaaraha kala duwan ( Sports Centre).
La tacaalidda Tahriibta:
Tahriibta waxa sal-u ah: rajo beel ka dhasha waayida waxbarasho, shaqo iyo waayista caadaaladda tartanka fursadaha. Tahriibta Waxa xal u ah: in xoogga la saaro sidii dhibaatooyinkaas looga horqaadilahaa dhalinyarada.
WADDANI waxaa ka go’an in ay dhalinyarada loo soo celiyo RAJADA taas oo keeni kartaa aaminaada dalkooda; loona abuuro fursadihii ay kaga qayb qaadan lahaayeen horumarkiisa iyo hoggaamintiisa oo aanay cidna u daba fadhiisan. Waa inaan aminaa in dalkeenna NIMCO FADHIDO loona sinaanado nimcadaas.
Jadwalkii uu soo saaray KDQ waxa uu ahaa kii loo baahnaa oo yimi waqtigii loo baahnaa. Komishanku wuu dadaalay marka la eego cimrigiisa. Waxay maanta u baxeen soo dhisidda komishanka gobollada iyo degmooyinka. Waxaan ilaahay uga baryeynaa inuu hawshaas u fududeeyo.
Waxaan ka rajeynaynaa inay soo dhisaan siidhi walaayaal tartamayaasha si cadaalad ah ugu garsooora. Komishanka Doorashooyinka Qaranku maaha Komishanka. Diiwaagelinta Qaranka. Waxaan ka sugaynay inay cayimaan maalinta doorashada. Maalintaas cayimaadeeda waxaan uga sugaynaa sida ugu dhakhsaha badan.
Waannu adagnahay, waannu ku adagnahay, waannu ku adagnahay in Komishanku maalintaas cayimo. Shacbiga Somaliland iyo bulshada caalamka oo saaxiibka la ah shacbiga Somaliland ee innaga taageerada gedi socod dimquraadiyada dhawaaqaas way sugaayaan, si weyn bay u sugayaan. Cayimidda maalintaas waa waajib sharciya oo saaran komishanka.
Komishanku waa inuu soo saaraa jawdal dhamaystiran oo doorasho una gudbiyaa Madaxweynaha JSL. Madaxweynuhu wuu inuu jawalkaas ku soo saara dikreeto Madaxweyne mudada sharcigu siiyey inuu ku soo saaro oo aan ka badnayn 15 maalmood.
Mawqifka Xisbiga WADDANI waxa uu la mid yahay mowqifka Is-bahaysiga Mucaaradka oo ah haddii doorooshinykii madaxtooyada iyo Golaha Wakiilada JSL ku qabsoomi waayaan waqtigooda, in sida ugu dhakhsaha badan la isugu yimaado talo qaran.
Marar badan baan xusnay in wadahadaladaasi ay madhalays noqdeen, waa Illaahay mahaddii, haddii shacbiga iyo xukuumadduba nagu raaceen soo Jeedintayadii in la hakiyo wadahadaalkaas. Marwo Faadumo Siciid waxay wafdiga Somaliland ee tegeyey shirka u sheegtay mawqifka Xisibiga WADDANI.
Haddii saaxiibada Somaliland caalamku la yimaaddaan hab ka duwan kan madhalayska noqday, waanu soo dhoweynaynaa in aynu la eegno, laakiin waa in marka hore aynu doorashooyinka is dhaafina oo innagoo dib u tashanay aynu eegnaa fa’iido iyo muddaraba waxay yeelan karaan. ALLAA MAHAD LEH.” Sidaa ayuu Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ah ee WADDANI Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cabdiraxmaan-Cirro) ku yidhi Khudbad qoraalkiisa uu ka jeediyey Shirweynaha 1-aad ee Dhalinyarada heer Qaran ee Xisbiga WADDANI oo maanta si rasmi ah uga furmay Huteel Maansoor ee magaalada Hargeysa.